Smoothie Banana Strawberry - Mahafinaritra sy tsotra! | ThermoRecipes
zava-pisotro5 minitraOlona 2
Efa eo ny vanim-potoana frezy! Tiako izy ireo, iray amin'ny ahy izany voankazo tianao. Ny mampalahelo dia maharitra kely fotsiny ny vanim-potoana. Imbetsaka aho no mividy 1 na 2 kilao ary hahafahako manomana azy ireo amin'ny fomba maro, manomboka amin'ny lemaka misy siramamy ka hatramin'ny horohoron-tany manankarena indrindra ary ny gilasy.
Androany dia te hampiseho aminao ny iray amin'ny ahy aho horohoro ankafiziko Matetika aho dia miomana amin'ny faran'ny herinandro, misasakalina, rehefa mody avy any amin'ny gym aho mba hanao fanatanjahan-tena. Izy io dia famatsiana vitamina tsy manam-paharoa. Mazava ho azy, mamporisika anao aho handray izany rehefa manomana azy ianao satria raha mandeha ny fotoana dia manomboka mihombo sy mihalehibe izy io.
Ity fomba fahandro ity dia mety indrindra ho anao izay manomboka amin'ny Thermomix, ho anao izay sakafoHo anao izay tsy tia voankazo loatra (ary hanana ampahany tsara ianao), ho an'ny ankizy sy ho an'ireo tsy mahazaka lactose, fantatro fa tonga lafatra amin'ny vokatra marika Kaiku.
1 Mavozavo akondro voaroy
3 Fananan'ny voaroy frezy sy akondro
4 Mahasoa ve ny mampihena ny lanja?
Malama tsara izay manome anao ny zavatra tsara rehetra momba ny voankazo.
Fotoana fiomanana: 4M
Akondro masaka 1
250 g ny voaroy masaka (hatsiaka)
Ronono 300 g na yaourt tsotra (mangatsiaka)
ranom-boasarimakirana vitsivitsy (safidy)
Napetrakay tsy nisy tahony ireo akondro voatavo sy frezy ary notetehintsika tao anaty vera.
Avy eo izahay dia manampy ny siramamy ary manampy ny ronono. Manampy voasarimakirana vitsivitsy izahay.
Izahay dia manao fandaharana 1 minitra, hafainganana mandroso 5-7-10.
Eto ianao dia afaka mametraka azy araka ny fanirianao (ronono, siramamy bebe kokoa) ary raha tianao dia voasarimakirana vitsivitsy.
Raha mila zavatra mangatsiatsiaka kokoa ianao dia amporisihiko ihany koa ity gilasy frezy miaraka amin'ny Thermomix azonao atao ny miomana ao anatin'ny 5 minitra sy amin'ny fomba tena tsotra. Iza amin'ireo no tianao?
Fananan'ny voaroy frezy sy akondro
Ny voany dia tsy maintsy ao anaty a sakafo voalanjalanja sy mahasalama. Noho izany, amin'ity tranga ity isika dia sisa tavela amin'ny roa amin'ireo lehibe. Amin'ny lafiny iray dia manana ny frezy isika no mpiaro tena lehibe. Ankoatra ny fananana asidra folika dia manana vitamina marobe toa ny B9 sy B11 koa izy ireo. Manankarena kalsioma izy ireo ary koa misy antioxidant. Ankoatr'izay, izy ireo dia mety amin'ny maso sy amin'ny fahasalaman'ny taolana. Raha tsy hadinoina fa anti-inflammatoire izy ireo ary hiady amin'ny kolesterola ratsy.
Etsy andaniny, ny akondro koa tsy dia taraiky ao aorian'ny vitamina. Manana A, C, B1, B2 ary B6 izy ireo. Manana koa mineraly toy ny potasioma, vy, na zinc, ankoatry ny hafa. Marihina fa manana gliosida koa izy io. Noho izany dia manambatra voankazo roa lavorary izahay hikarakarana ny vatantsika sy hampihena ny kaloria kely. Ny voaroy frezy sy akondro dia tena mety ho entina hanina kely na tsakitsaky ary tsy manenina momba izany. Izy io dia zava-pisotro mahasalama ary mandritra izany fotoana izany dia hanafoana ny poizina amin'ny vatanao. Inona koa no mbola angatahintsika?
Rehefa avy nahalala fa miatrika iray amin'ireo zava-pisotro voajanahary indrindra izahay ary misy fandraisana anjara lehibe dia manana fanontaniana iray hafa hamahana izahay. Raha manontany tena ianao raha manampy anao hihena, dia mamaly izahay hoe. Izany hoe tsy hanome kaloria bebe kokoa anao izany, ao anaty sakafo mahasalama foana. Azontsika lazaina izany Akondro 100 grama no hanome kaloria 89 eo ho eo. Raha frezy, isaky ny 100 grama dia hamela kaloria 33 ho antsika izy ireo. Ampio ronono skim foana ny ahitrao ary esory ny siramamy. Azonao soloina tantely antsasaky ny sotrokely izy io na ampio kanelina kely fotsiny ho an'ny tsirony.
Araka ny efa noresahintsika dia mahavoky izy. Ka miaraka amin'ny vera vita amin'ny frezy sy frezy akondro no homenay ny vatana vitamina sy mineraly marobe, tsy misy kaloria firy. Ho an'izany rehetra izany dia ilaina ny mihinana eo anelanelan'ny sakafo, rehefa mangataka karazana snack anao ny vatanao. Mazava ho azy, mitazona sakafo voalanjalanja foana ary mazava ho azy, manaova karazana hetsika ara-batana. Tsy ho ela dia ho hitanao ny fiovan'ny vatanao!
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Misotro sy ranona, Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny 15 minitra, Resipeo amin'ny fahavaratra, Resipeo ho an'ny ankizy, fitondrana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Misotro sy ranona » Mavozavo akondro voaroy
Raha tianao dia azonao atao ny manampy iogurt mba hanomezana menaka bebe kokoa ny fikororohana !!!!
Mamaly an'i ferran
Fandraisana anjara soa Ferrán!
Nerwen dia hoy izy:
Salama Irene, fomba fahandro tena tsara !! Manararaotra ireo frezy vanim-potoana mandritra ny alina ao an-trano dia manao «smoothie» sy voasarim-boankazo izahay hisakafoanana… ka anio hariva no hataoko ity !!! Misaotra ny recette =)
Valiny tamin'i Nerwen
Tsara izany, misaotra an'ireo resipeo andefasanao ahy. Tiako ianao hanome ahy fomba fahandro ho an'ny jam, frezy misy akondro, raha fantatrao. Misaotra betsaka
Salama Lidia, misaotra betsaka. Tsy fantatro izay misy frezy sy voam-boankazo, fa misaotra an'ity hevitra ity… Ho avy tsy ho ela aho. Mirary ny soa indrindra!
Salama, Irene, raha manandrana ianao ary hita fa tsara dia azonao ampitaina amiko io ok. Misaotra betsaka. Mirary ny soa indrindra.
Omaly dia nanamboatra kitapo misy akondro,
ary mijanona ho mahatalanjona foana aho. Manoro hevitra anao aho mba hanandramanao, misy akondro masaka foana izay tsy tadiavin'olona, ​​arahabaona.
Lidia mahafinaritra! Afaka alefanao amiko ve ny fomba fahandro irene.arcas@actualidadblog.com?
Rahampitso manana vahiny tiako ny malama fa tsy mahazaka lactose aho. Mihevitra ve ianao fa afaka manao izany amin'ny rano aho? Tsy hitovy izany ... Fa misy tolo-kevitra ve? Misaotra! Mirary ny soa indrindra
Valiny tamin'i Monik
Salama Monik, tsy olana ny tsy fandeferanao lactose. Hanova ny rano aho amin'ny fanomanana ronono tsy misy lactose toa an'i Kaiku (mety ho yaourt na karazana ronono). Tsara vintana!
matigr72 dia hoy izy:
Salama, tiako ny manampy ronono mihoapotra fa tsy siramamy ary totoina ao anaty blender, asa kely kokoa io, fa ho hitanao ny fivoaran'ny malama. Ah, avy ao amin'ny tanàn-frezy aho, izany hoe avy any Lepe . Mirary ny soa indrindra.
Mamaly an'i Matigr72
Salama Matigr72! Mahafinaritra ny soso-kevitrao… Tsy tiako ho sary an-tsaina akory ny hahasaroany azy amin'ny ronono miharo. Hosedraiko amin'ny manaraka izany. Misaotra nanaraka anay !!
Requena82 dia hoy izy:
Salama Irene, tena tsara ilay recette, nomaniko izy tamin'ny alàlan'ny fametahana serum proteinina kely aorian'ny fiofanana ary matsiro izany.
Valiny amin'ny Requena82
Misaotra! Faly be aho fa tianao izany, tiako manokana izany. Io no iray amin'ireo horohoron-tany tiako indrindra 🙂
Tsara io ary fomba tsara hanomezana voa ny ankizy. Misaotra betsaka an'ireo resipeo.
Misaotra anao Soledad tamin'ny fanarahana anay sy ny fanoratanao anay! 🙂
Te hahafantatra aho raha afaka manamboatra malama ny frezy raha tsy misy siramamy?
Sôkôla fotsy, rongony ary panettone manga